အမ်စတာဒမ်မှဘာလင်သို့ရထားဖြင့်သွားရန်အကောင်းဆုံးနည်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အမ်စတာဒမ်မှဘာလင်သို့ရထားဖြင့်သွားရန်အကောင်းဆုံးနည်း
အမ်စတာဒမ်မှဘာလင်သို့ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည်ခရီးသွားကိုမမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံနှင့် Eco-friendly ရွေးချယ်မှုကိုပေးသည်. အဆိုပါပေမယ့် ခြောက်နာရီကြာခရီးစဉ်ကို နည်းနည်းနှေး, အဆိုပါရထားကကမ်းလှမ်းသက်သာနှင့်များ၏ကျက်သရေ ခရီးစဉ်ထူးချွန်ဖြစ်ပါသည်. နှင့် လှပသောရှုခင်း လမ်းတစ်လျှောက်, အချိန်ကိုလွန်သွားကူညီရန်နှင့်ထမင်းစားခန်းကားတစ်စီး, အဆိုပါခရီးစဉ်ကိုအများကြီးပိုမြန်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်. ဤတွင်ဘာဖြစ်ပါသည် ဥရောပ၌ရထား ဒီလမ်းကြောင်းကိုအဘို့ကမ်းလှမ်းမှု.
ခေတ်သစ်မှာရောက်ရှိလာ Hauptbahnhof (HbF) သင်သည်အမ်စတာဒမ်မှဘာလင်သို့သို့မဟုတ်ဘာလင်မှအမ်စတာဒမ်သို့ရထားဖြင့်သွားသောအခါ, ရှေ့ဆက်တည်ရှိသည်သောခရီးစဉ်အကြောင်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားရဖို့မခဲယဉ်းပါကဖွင့်. အဆိုပါဘူတာရုံပေါင်းများစွာကြမ်းပြင်နဲ့သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်ပါသည်, ဘယ်မှာရထားဆိုင်းငံ့သံလမ်းအားဖြင့်သင်တို့၏ဦးခေါင်းကူး. ဒါဟာမက်ထရိုလိုင်းများမှတဆင့်ကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်မြို့အရာကြွင်းလေသမျှရန်ဖြစ်ပါသည်နှင့် ဘတ်စ်ကား ဘူတာရုံ, ဘာလင်၏ဗဟိုအတွက်. သငျသညျဘာလင်နေရာထိုင်ခင်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်မလာကြပါလျှင်, ရုံမိနစ်ကွာဘူတာမှကောင်းတစ်ဦး option ကိုအချင်းချင်းဟိုတယ်ဖြစ်ပါသည်.
သင်သည်အမ်စတာဒမ်မှဘာလင်သို့ရထားဖြင့်ထွက်ခွာသောအခါ, သငျသညျအမ်စတာဒမ်အတွက်ကျော်ကြားဗဟိုစခန်းဝင်, မြို့အပါဆုံးလောက၏အဆောက်အဦးများထဲကတစ်ခု, အဖြစ်ကောင်းစွာများ၏လေဆိပ်အဖြစ် Schipol. အလွယ်တကူ, အဆိုပါ ဗဟိုစခန်း အတွင်းတည်ဆောက်ခဲ့ 1889, ယနေ့အကြောင်းကိုအားလက်ခံတွေ့ဆုံ 250,000 တစ်နေ့လျှင်ခရီးသည်. အဆိုပါဘူတာရုံအလွန်ကောင်းစွာ signposted ဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျဒတျချြမပြောတတ်ဘူးဆိုရငျ, ရုံပလက်ဖောင်းအမည်ကြောင်းကိုသတိရပါ “လမ်း”. လိုအပ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျအခြို့သောအင်္ဂလိပ်စကားများသောနိုင်ပါတယ်, ဘူတာရုံ၏လှံတံဘာသာစကားကိုပြောတတ်ကတည်းက. အမ်စတာဒမ်အတွက်, ဗဟိုဘူတာရုံအနီးနေရာထိုင်ခင်းကောင်းတစ်ခုရွေးချယ်ခရုစုတ်ပုံစံဖြစ်ပါသည်. အဲဒီမှာ, ရထားဘူတာရုံဗဟို၌တရားသောကွောငျ့တည်နေရာကိုပြီးပြည့်စုံ, အကျိုးစီးပွားအရပ်မှနီးစပ်.
အမ်စတာဒမ်မှဘာလင်သို့ရထားဖြင့်အမြန်ရထားသည်မကြာခဏဖြစ်သည်, နှင့်တစ်နာရီလျှင်အကြောင်းကိုနှစ်ခုရထားရှိပါတယ်. အများစုမှာနေ့ကရထားတစ်ဦးအလွန်အဆင်ပြေဝန်ဆောင်မှုပူဇော်, ဒါပေမယ့်နည်းနည်းနှေးနှေး, သူတို့ကလမ်းတလျှောက်တွင်အများအပြားမြို့ကြီးများအတွက်ရပ်တန့်အဖြစ်. ဘာလင်မှအမ်စတာဒမ်ကနေပထမဦးဆုံးမီးရထားမှာထွက်ခွာ 6:58 နံနက်, မှာဂျာမန်မြို့တော်ရောက်ရှိ 13:20. ဘာလင်ကနေအမ်စတာဒမ်မှ, ပထမဦးဆုံးမီးရထားမှာထွက်ခွာ 06:37 နှင့်ရောက်ရှိ 13:08. တစ်နေ့တာအတွင်းခရီးစဉ်၏အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, သံသယတစ်ခုမှမရှိဘဲ, အဆိုပါရှုခင်းများဖြစ်ပါသည်. ဂျာမဏီ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်နယ်သာလန်အတွက်အသေးစားမြို့ကြီးများ, အဖြစ်တောင်များနှင့်ကျေးလက်ရှုခင်းများ, လုံးဝရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာများမှာ!
ဘာလင်မှအမ်စတာဒမ်ကနေရထားပေါ်တွင်ထိုင်ခုံ options များကွဲပြားခြားနားကြသည်. သမားရိုးကျထိုင်ခုံကနေအမတ်နေရာလျောင်းနှင့်ပင်ကုတင်မှပြောင်းကြပြီလေအေးပေးစက် Cabin ဤပ္ပံ. ခရီးရှည်လျားသည်ကတည်းက, ဤအ Cabin တခရီးသွားလာ, ထိုကဲ့သို့သောအလင်းကဲ့သို့ extras ကမ်းလှမ်းရာ, လက်တော့ပ်နဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းများအဘို့အအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပလပ်, သောတစျခုလုံးကိုခရီးစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့အခန်း၏နှစ်သိမ့်အတွက်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေစေသည်. သင်တို့သည်နောက်ပြဿနာဖြစ်ပျက်သေချာအောင်ဒီတော့ကြိုတင်မှာအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်သင့်ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုဝယ်ဖို့သတိရပါ.
ငါတို့သည်သင်တို့ဘာလင်မှအမ်စတာဒမ်ကနေစီးနင်းကိုးကွယ်လိမ့်မည်ဟုအများဆုံးကျိန်းသေသေချာ, နှင့်အပြန်အလှန်. ဟုတ်ကဲ့, သင်ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကြိုးစားကြည့်တစ်ချိန်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခြားခရီးစဉ်ရှိပါလိမ့်မည်, သင်အမြဲပြန်မီးရထားကို ယူ. အပြည့်အဝခရီးကိုခံစားချင်ကြလိမ့်မည်.
ဒါကြောင့်, သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ မီးရထားခရီးသွားလာ ရထားဖြင့်နယ်သာလန်နှင့်ဂျာမနီအကြား? ဒါဆိုရင်ငါတို့နှင့်အတူသင်၏ရထားလက်မှတ်တွေစာရင်းသွင်းပါ3မိနစ်များ, obnoxious ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေများစျေးအသက်သာဆုံးနှုန်းထားနှင့်စိတ်သက်သာရာမှာ!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Famsterdam-berlin-train%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
ရထားခရီးသွား travelamsterdam ခရီးသွား travelgermany netရာဝတီ traveltips